“အတွေးစလေးတွေ”: အိမ်ရှင်ထီး ဦးဟန်ကြည် . . .
Posted by Han Kyi at 7:02:00 am
မဒမ်ကဖတ်ပြီးရှေ့ လဆန်းအောင်တောင်မနေဘဲ ချက်ချင်းပြန်လာလိမ့်မယ် မယုံရင်ကြည့်
မဒမ်ဟန်ကြည်မရှိတဲ့ တစ်လတာဟာ ဆရာ့အတွက် တစ်နှစ်စာလောက်ကြာသွားမယ်ထင်တယ်...။ မဒမ်အမြန်ဆုံးပြန်ပြေးလာလိမ့်မယ် ဆရာများများသာငိုပြ...။
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ပို့စ်ဖတ်ပြီးမှပဲ လွမ်းရေးထက် ၀မ်းရေးခက်တာ သဘောပေါက် သွားပါကြောင်း ... ။ :)
ဆရာပြာယာခတ်နေသည့်ပုံကို မြင်ယောင်နေမိပါရဲ့။ မဟေသီ မရှိတဲ့အခိုက် ကျောင်းသားနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကို အိမ်ခေါ်ထားပြီး ကူခိုင်းလိုက်ပေါ့ဆရာရယ်။
လွမ်းရင်လွမ်းတယ်ပေါ့ ဆြာရယ် ၀န်ခံလိုက်စမ်းဘာာား)
မဒမ်ကြည်လေး မြန်မြန်ပြန်လာအောင် ဓါတ်ရိုက် ဓါတ်ဆင် လုပ်ပေးရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ပုံထဲကအတိုင်း မြင်ယောင်လာလို့။း)
မဒမ်တစ်ယောက် သူ့တန်ဖိုးကို သူ့လင်တော်မောင် သိတတ်နားလည်တတ်အောင် ပညာပေးတဲ့အနေနဲ့ ရက်ရှည် ခွဲခွါနေပြပေးလိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်။ ဟာ ဟ။
:D.. မျက်စိထဲမြင်ယောင်နေတယ်.. .ဆရာဟန်ကြည့်ပုံကို... :D
ငါ့ ဆရာရယ်၊ ထမင်းအိုးတည်ရင်းတောင်
အပေါ်ဆုံးက ပုံကို မြင်ရတော့ 
အတက် အဲ.. အသက်တောင် မနဲ ရှုခဲ့ 
ရပါတယ်။ “ ဘဝ ” ရဲ့  ချိုမြိန်ခြင်းဆိုတာ
အိမ်ထောင်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့အဖော်မရှိရင်သိပ်သိသာတာမျိုးထင်ပါရဲ့ ကိုဟန်ကြည်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ မြန်မာပြည်ကို ခဏပြန်တုန်းကလည်း အဲဒီလိုပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆိုင်မှာပဲ ၀ယ်စားပစ်လိုက်တယ်ဗျာ။ တကယ်တော့ အိမ်ရှင်ထီးဖြစ်တာကို ဖွဲ့တာထက် အိမ်ထောင်ရှင်မကို လွမ်းတဲ့ အလွမ်းဖွဲ့လို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်လာမှ သည်လိုခံစားမှုကိုရတတ်တာမဟုတ်လား။ တကယ်တော့ သူလုပ်ခဲ့တာတွေ ကိုယ်လုပ်ရလို့၊သူ့ကိုလိုအပ်လို့ ဆိုတာမျိုးထက် သူ့ကို လွမ်းတာပါဗျာ။ ကိုဟန်ကြည် အဲဒါကို တမင် မြှုပ်ထားတယ်လို့ ထင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဇနီးကို လွမ်းတာတော့ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ထောင်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရောပြီးမျှဝေခံ စားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကဲ-ကိုဟန်ကြည်ရဲ့ အမျိုးသမီး အမြန်ပြန်လာပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်.......ခင်တဲ့
27 January 2012 at 04:15
ဒါ ထမင်းဟင်းချက်ရတဲ့ ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြပြီး မဒမ်ကြည်
ကို အမြန်ပြန်လာအောင် ဘလော့ကနေ ကြော်ငြာလိုက်တာ
မှတ်လား......၊ကြည့်ရတာတော့ ဆရာတစ်ယောက် ဆရာ
27 January 2012 at 04:20
း) မြင်ယောင်မိပါသေး၏ ဆြာရယ်း)း)
ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဆြာ ဂလိုအလုပ်တွေရှုပ်ပေးနေတာကိုက လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိသကိုးးး)း)
ဦးဟန်ကြည် ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတော့ မျက်ရည်တောင် စို့သွားတယ်၊ ကိန္နရီ မောင်နှံလို ၇ ရက်ဝေးလို့ နှစ်ပေါင်း ၇၀၀ ငိုရမလို ဖြစ်နေပြီ.....
ဟဟဟ ခုမှ မဒမ်ဟန်ကြည်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေ နားလည်နေတာ နားလည်နေတာ :P :P
အိမ်ရှင်ထီးကြီး ဦးဟန်ကြည် ဘာဟင်းတွေ ချက်စားလဲကျတော့ ရေးဘူး ဟိဟိ
တစ်ယောက် ကနေ နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမှ တစ်ယောက်ထဲ ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ ဒုက္ခတွေပေါ့ဆရာဟန်။
ကျနော်တို့လို လူပြိုဂျီးတွေပဲ ကောင်းတယ် :)
ဆရာဟန့် စာကို ဖတ်ပြီးတော့ မန်းလေးက ဆရာဝန် စာရေးဆရာ ရေးတဲ့ ဝတ္ထုလေးကို သွားသတိရသဗျ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မဒမ်ဟန်ကြည်ကလည်း သတိရနေမှာပါပဲ။ အားကျဒယ် . . . ဝေးနေရတာကိုတော့ မဟုတ် . .ဟားဟား။
ဆြာ ပဲပုတ်လေးတော့မဒမ်ဟန် အတွက်
အပေါ်က အကို အမ တို့က ဘာသိလို့တုန်း..
မဒမ်ဟန်ကြည်နဲ့ အွန်လိုင်းမှာ အလွမ်းသယ်နေလို့ ဝက်အူချောင်းတွေ မီးသွေးဘဝရောက်သွားတာ..ဟိ
အတွေ့အကြုံလေးတွေ အသစ်ဆန်းရတာပေါ့ အကိုရ...:):) နောက်တစ်ခါ အိမ်ရှင်မကို ခရီးကြာကြာထွက်ဖို့ ပြောရမယ်...:P:P
29 January 2012 at 08:58
တင်လုံလောက်နေပါပြီး)) ပုံကိုကြည့်ပြီးရီမောတာအတော
ဒါတွေ သိလို့ လူပျိုလေး လုပ်နေတာ..ဟီးးးးးးးးး။။။
ကဲ မရှိရင် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရဲသလား
2 February 2012 at 03:56
ဆရာ ပို့စ်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ပုံအတိုင်းပြေမြင်မိလို့ တွေးတွေးပြီးတော့ကိုရယ်နေရတယ်ဗျာ။
ဆရာ့ ရဲ့လွမ်တော့်မူလို့ စာကိုစီခြင်းကြောင့် ဆရာ့အမျိုးသမီး အပြေးရောက်လညပါလိမ့်မယ်။
ဆရာ အလုပ်များတဲ့ကြားကဘဲ ဆရာ့ရဲ့ ထုံးအိုးထဲကို ကျွန်တော် ရေဖြည့်ပေးခဲ့တယ်နော် အားတဲ့အချိန်လေးကျရင် လိုက်တို့ပေးပါဦး
ဆရာ ထုံးအိုးထမ်းမလာတာကြာတော့ အိုးထဲမှာ ရေခမ်းနေသလားလို့ပါးးD။